६ बैंक बेहुलीको खोजीमा हिँडे - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com ६ बैंक बेहुलीको खोजीमा हिँडे - Aathikbazarnews.com
६ बैंक बेहुलीको खोजीमा हिँडे
नेपालका ठूला दुई वटा बैंक जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबीच मर्जर भई नेपालकै ठूलो चुक्ता पुँजी र ग्राहक भएपछि साना वाणिज्य ६ वटा बैंक मर्जरमा जान आतुर देखिएको भेटिएको छ ।
सेञ्चुरी कर्मर्शियल बैंक, सीभिल बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनसीसी बैंक र लक्ष्मी बैंकले मर्जरको साथी खोजी रहेको देखिन्छ । बल्लतल्ल ८ अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याएका यी ६ वटा बैंकले आफूहरु मर्जरमा जान तयार रहेको यसका लागि राम्री बेहुली खोजी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह नै गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यी ६ वटै बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुबीच राष्ट्र बैंकमै २ पटक छलफल भएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । यी ६ वटा बैंकका आ–आफ्नै कारण छन् । मर्जरमा जाने सीभिल बैंक ठूलो प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । सानो आकारको नाफा छ । अनुभवी र दक्ष सीइओ गोविन्द गुरुङले विगत ३ वर्ष देखि हाँकेको यस बैंकले केही प्रगतिका पाइला भने चालेकै देखिन्छ । अर्को सेञ्चुरी बैंकले पनि यति प्रगति गरेको छैन । तर, यस बैंकले पछिल्लो क्वाटरमा नाफामा छलाङ्ग मारेको छ । बैंकिङ्ग बुझेका र सक्षम बैंकर तुलसीराम गौतमले हाँकेको सेञ्चुरी बैंकले पछिल्लो समय सकारात्मक संकेत पक्कै दिएको छ । तर, यतिले मात्रै नपुग्ने निश्चित छ ।
एनसीसी बैंक सधैं एउटा न एउटा विवादमा फस्दै आएको बैंक भन्दा फरक पर्दैन । जीतबहादुर र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठको दादागिरीबाट अझै बैंक मुक्त छैन । बल्लबल्ल ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याएको यो बैंक नेपाल बंगलादेश बैंकसंग मर्जर भए अचम्म मान्नु पर्दैन । राष्ट्र बैंकले यी दुई वटा बैंकबीच मर्जर गराउन १ पटक दुबै बैंकका सञ्चालक र अध्यक्षहरुलाई छलफल समेत गराएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।
कुमारी बैंक अहिले बैंकिङ्ग नम्स बुझेका र बैकिङ्गमा दखल भएका सीइओ सुरेन्द्र भण्डारीले हाँकेको बैंक हो । पछिल्लो समय बैंकले सबै सूचकहरुमा छलाङ्ग मारेको देखिन्छ ।
बैंकमा सानो सञ्चालक समिति दक्ष तीन डिपुटी सीइओले भरिएको कुमारी बैंकलाई ग्लोबल, नविल, एनआईसी एशिया जस्ता प्राइभेट बैंकहरुसंग प्रतिपर्धा गर्न सजिलो भने छैन । यी बैंकको दाँजोमा पुग्न मर्जर कुमारी बैंकलाई जरुरी नै देखिन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंकसंग मर्जर जर्ग आग्रह गरेको र छलफल समेत भएको स्रोतको दाबी छ ।
सिटिजन्स बैंकलाई कम शाखा सञ्जाल मध्येको बैंक मानिन्छ । पूजी ८ अर्ब भएपनि नाफा यति राम्रो छैन । पूराना अनुभवी बैंकर राजन सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको उक्त बैंकलाई उनीले नै उत्पादन गरेका युवा बैंकर गणेशराज पोखरेल सीइओ छन् भने पूर्व सीइओ भण्डारी अध्यक्ष छन् । सिटिजन्स बैंकलाई पनि ठूला १० बैंकहरुसंग प्रतिपर्धा गर्न यति सजिलो पक्कै छैन । सिटिजन्स बैंकलाई सीभिल बैंक लिन राष्ट्र बैंकले छलफल नै गराएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
अर्को बैंक लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको एभरेष्ट बैंकसंगको मर्जर तुहिएको छ । युवा बैंकर अजय शाहले हाँकेको लक्ष्मी बैंकले केही शाखा विस्तार गरेपनि नाफामा ठूलो बैंकलाई भेट्न वा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन । राजेन्द्र खेतानको मेजर शेयर भएको यो बैंकले एभरेष्ट बैंकसंग मर्जर गर्ने भनिए पनि तुहिएको थियो ।
पछिल्लो समय लक्ष्मी बैंकलाई मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले राजेन्द्र खेतानलाई नै बोलाएर छलफल समेत गरेको खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्को खेतान समूहको ११ प्रतिशत शेयर भएको हिमालयन बैंकसंग मर्जर गर्न दबाब राजेन्द्र खेतानलाई दिएको छ । तर, उनी हिमालयन बैंकसंग मर्जर गर्न तयार छैनन् । त्यसकारण नयाँ बेहुली खोजी दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह खेतानले गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंक भित्र्याउँदै छ भने प्राइम बैंकले कैलास विकास बैंक भित्र्याउँदै छ । तपाईहरु ५÷६ वटा बैंकले पनि पार्टनरसीप खोज्नुहोस् । हामीले भनेका छौं । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले दाबी ग¥यो ।
स्रोत भन्दछः– हामीले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सीइओ सावहरुको कुलिङ्ग समयमा छुट लिएका छौं । अरु पनि सुविधा दिने भनेका पनि छौं । त्यसकारण इगो र घमण्ड नदेखाई मर्जरमा जान बैंकहरुलाई भनेका छौं ।
ग्लोबल आईएमई बैंक नेपालकै ठूलो बैंक बनेपछि ठूला बैंकहरुलाई पनि मर्जरको दबाब बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत भन्दछ ः– ठूला बैंक हामीसंग मर्जरको हल्का कुरा मात्रै गर्दछन् । तर ६ वटा बैंकहरु भने राम्रो साथी पाए तत्कालै मर्जरमा जाने पक्षमा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक पहल शुरु गरिदिएको छ । केही महिना भित्रै ६ बैंकको नतिजा वाहिर आउने देखिन्छ नि स्रोतले दाबी ग¥यो ।
जे भए पनि अब मर्जरको विकल्पनै छैन । ठूला बैंकसंग प्रतिपर्धा गर्न पनि मर्जर अनिवार्य देखिन्छ । सचेत भया ।राजतिलक साप्ताहिक
संघिन आरोप सहित सनराईज बैंकका सीइओ पौड्याललाई यसरी सोधिएको थियो, बैंक सञ्चालक समितिले स्पष्टिकरणः सीइओ पौड्याललाई बर्खास्त गर्ने तयारी
आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने यी कुराः कोरानाले निम्ताएको बीग मर्ज अहिलेको आवश्यता कि बाध्यता ?
सयौं ऋणीहरु बैंकहरुको कालो सूचिमा पर्ने डरः राष्ट्र बैंक बेखबर ?
२ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि प्रिमियम भएका बीमा लेखको जिम्मा अब कसले लिने ?
सञ्चय कोषको ७८ अर्ब बैंकमा थन्कियो
१० बैंक बाहेक सबै कम्पनी खराबको सुचीमा
रिलायन्स लाईफ इन्योरेन्स­द्वारा तीज कार्यक्रम
लकडाउन उल्लंघन गर्ने १० जना पक्राउ